IINGCAMANGO EZINGAMA-40 ZOGCINO LWEDVD- ULUNGELELWANISO LOQOKELELO LWEEMOVIE - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango ezingama-40 zoGcino lweDVD- uLungelelwaniso loQokelelo lweeMovie
Ugcina phi ingqokelela yakho yeeDVD? Baninzi kakhulu abantu abagcina kwibhokisi yekhadibhodi endala kwenye indawo kwigumbi eliphezulu okanye kwigumbi lokugcina.
Ngelixa oku kunokubonakala ngathi kukulungisa ngokukhawuleza ukubasusa endleleni, kuphela, ukulungiswa ngokukhawuleza. Ukuba ubeka ingqokelela yeDVD kwindawo ethile, awuyi kuba naphantsi kokufuna ukuyikhupha ngalo lonke ixesha wena nabahlobo bakho okanye usapho nifuna ukubukela imovie.
Sinqwenela ukwabelana namhlanje ngezinye izimvo zokugcina i-DVD zokugcina ingqokelela yakho yemovie ngendlela efikelelekayo ngaphandle kokuthatha indawo yakho yokuhlala. Ukuba unayo indawo yokugcina iincwadi esele ikho kwindawo ohlala kuyo, jonga ukuba ungagcina ishelufu yokuqokelela imovie. Ngale ndlela, ungabona ukuba zeziphi izihloko onazo ngokubonayo, kwaye ukhethe imovie efanelekileyo ngokuhlwa.
Olunye uluvo kukubeka iishelufa zodonga kwiqoqo lakho leDVD. Ukwenza ngokwezifiso isitshixo kunye neeshelfu zodonga kuba ungakhetha isixa esifanelekileyo sokugcina ingqokelela yakho.
Ukuba uthanda ukugcina izihloko zamva nje zibonisiwe, unokukhetha iishelfu ezimbalwa kunalowo ufuna ukuqokelela yonke eludongeni. Unokukhetha ngokulula izinto ezishelifini kwivenkile yakho yendawo ohlala kuyo kwaye ukhethe uyilo okanye isitayile esifanelana nendawo ohlala kuyo.
icala leetattoo zamadoda
I-tattoo yomvuni emnandi yaseMelika
Iitatto zamagxa zamadoda ayila imifanekiso
Ingalo engaphambili yomkhono wesiqingatha somzobo